नबुझेको शीतयुद्धकालीन राजनीति
समानान्तर नबुझेको शीतयुद्धकालीन राजनीति
बाह्रखरी - गोविन्द अधिकारी बिहिबार, पुस २३, २०७७
सत्य थाहा पाउन समय लाग्दो रहेछ । देखेकै घटनाको यथार्थसमेत उति बेलै थाहा नहुँदो रहेछ । बुझ्ने त झन् टाढाको कुरा । राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको चर्चा यो वर्ष अलि राम्रैसँग भयो । बीपीका राजनीतिक समर्थकहरूले मात्र सम्झने गरेको पुस १६ को अध्येताहरूले विभिन्न कोणबाट सत्यान्वेषण र विश्लेषण गरे । घटनाका पात्रहरूमध्ये धेरैको निधन भइसके पनि साक्षीहरू जीवितै भएकाले नयाँ केही लेखिए पुष्टि वा खण्डन हुने मौका अझै छ ।
म यहाँ यसपटक पनि चर्चा नगरिएको तर राष्ट्रिय मेलमिलापकाे नीति लिएर बीपी कोइराला र उनका निकट सहकर्मी नेपाल फर्केलगत्तै नेपालमा भएका दुईवटा घटनाको सम्झना गराउने जमर्को गर्दैछु । यी घटनाले बीपी कोइराला नेपाल फर्कँदा उत्पन्न तरङ्गको विश्लेषण गर्न थप सहयोग पुग्ला कि ?
बीपी कोइराला फर्केपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलै हलचल मच्चिएको थियो । पञ्चहरू एकातिर बीपी केही हैनन् भन्ने देखाउन खोज्थे भने अर्कातिर उनको उपस्थितिबाट निकै झस्केका देखिन्थे । कम्युनिस्टहरू त सधैँ नै बीपीको विरोधै गर्थे । बीपी नेपालै फर्केपछि उनीहरू झस्केका थिए । बीपीले धेरै भन्ने गरेका ‘आइडिट फर्मुला’ले पञ्चायतमा पसेका कम्युनिस्टहरू झन् बढी झस्के झैँ लाग्थ्यो । यद्यपि, शीतयुद्ध नसकिएकाले कम्युनिस्टहरू पनि विभाजित नै थिए । तर, बीपीलाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोणमा भने धेरै अन्तर देखिँदैन थियो ।
राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति र आफ्नो स्वदेश फिर्तीको औचित्य साबित गर्न बीपीले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ भन्दा राजा एवं उनका समर्थकलाई बढी बिझाएको देखिन्थ्यो । तर, बीपीको स्वदेश फिर्ती र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको विरोध भने पञ्चायतमा प्रवेश नगरेका तथा प्रजातन्त्रवादीकै रूपमा चिनिएका राजनीतिज्ञहरूले पनि गरेका थिए । अचम्म, उनीहरूको विरोधको चर्चा भने राष्ट्रिय मेलमिलापको गहन अध्ययन गरेर लेखिएका लेखहरूमा पनि भेटिएन ।
बीपी कोइरालाको स्वदेश आगमनको विरोधमा टंकप्रसाद आचार्य, डा. डिल्लीरमण रेग्मी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र डा. केशरजङ्ग रायमाझीले वक्तव्य दिएका थिए । यीमध्ये आचार्य चीन निकट, उपाध्याय भारत निकट तथा रायमाझी रुस निकट मानिन्थे । डा. रेग्मी पनि भारत-रुस खेमाकै नजिक मानिन्थे । यिनको वक्तव्यलाई ‘चार वरिष्ठको' वक्तव्य भनिएको थियो । वक्तव्यमा पञ्चहरूको भन्दा नरम भए पनि बीपीको विरोध गरिएको थियो । त्यति बेला राजा चीन-अमेरिकी खेमा निकट मानिन्थे । बीपी पनि पश्चिम समर्थक ठानिन्थे । तर, शीतयुद्धका दुवै पक्षले न बीपीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने पञ्चहरूसँग स्वर मिलाए न त बीपीको मेलमिलाप नीति नै स्वीकार गरेका थिए । शीतयुद्ध चर्केका बेलामा पनि किन दुवै खेमा बीपीको विरोध गर्न प्रवृत्त भए ? अध्येताहरूले खोजे हुने ।
अर्को कम चर्चा भएको घटना नेपाली कांग्रेसको विभाजन हो । बीपी स्वदेश फर्केर आएपछि नेपाली कांग्रेसका ३८ जना वरिष्ठ नेताहरूले बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा पञ्चायतको समर्थनमा वक्तव्य दिए । सरकारी सञ्चार माध्यममा प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भनेर प्रसार प्रचार गरियो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा कांग्रेसको अस्तित्व स्वीकार गरेको भनेर मण्डले र कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका पञ्चहरूले चर्कै आलोचना गरे । प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले पार्टीहरू प्रतिबन्धित भएका तर भंग नभएका भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए । काशीनाथ गौतम, अच्युतराज रेग्मीलगायतका वरिष्ठ नेताहरुले किन बीपीलाई कमजोर देखाउन त्यसरी वक्तव्य दिए ? उनीहरूले पञ्चायतलाई समर्थन गरेकै केही समयमा राजाले जनमत संग्रहको घोषणा गरे । जनमत संग्रहमा चार वरिष्ठहरूमा साथै ३८ से समूहका नामले चिनिने बखानसिंह समूह पनि बहुदलकै पक्षमा लागेका थिए । त्यतिबेला सामान्य जनले पञ्चायत राजाको र बहुदल बीपीको ठान्थे । मेलमिलापको विरोध गर्नेहरू बीपीका दृष्टिमा ‘विदेशी एजेन्ट’ थिए ।
पञ्चायतलाई समर्थन गर्नु नै थिएन भने यिनले बीपीको विरोध किन गरे त ?
यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर अहिलेका अध्येताले खोज्नुपर्छ । हाम्रो पुस्ता बीपीसँग निस्पृह रहन सकेन । कि त उनका समर्थक भए कि त विरोधी । कम्युनिस्ट नेताहरू त बीपीका साहित्य पनि पढ्रन हुन्न भन्थे रे ! यस्तै राजाप्रति पनि हाम्रो पुस्ता निस्पृह थिएन । पञ्चहरू त हुने नै भए धेरै कम्युनिस्टहरू पनि राजा कि बीपी भन्ने प्रश्नमा राजाकै पक्षमा हुन्थे । बीपी पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूको भर पर्न हुँदैन नै भन्थे । यसैले बीपीप्रति आग्रह नराखी खोज्न र विश्लेषण गर्न यी सबै नभोगेको पुस्ताका अध्येता हुनुपर्छ । नयाँ पुस्तामा पनि राणाका चाकरका सन्तानमा बीपी र कांग्रेसप्रति अचम्मको द्वेष छ । राणा चाकरहरूको नाति पुस्तासम्म पनि सायद घरमा पुराना अन्नदाताहरूको प्रशस्ति सुनेर हुर्क्यो । यसैले उनीहरूमा आफ्ना मालिकको सत्ता खोस्ने कांग्रेस र बीपीप्रति गहिरो द्वेष छ । यिनले गर्ने विश्लेषण त के घटनाको विवरण पनि सत्यको नजिकसमेत हुँदैन । दसैँ मान्न पनि राजासँग हात नथापी नहुनेहरूले गुन र नुन सम्झने नै भए ।
यस्तै, गर्भे कांग्रेसहरू सधैँ बीपीकै अलाैकिक व्यक्तित्वका बारेमा सुनेर हुर्के । तिनमा पनि अचम्मको बीपी मोह छ । तीन पुस्ते कांग्रेसहरू बीपीको आलोचना सहन सक्तैनन् । अरू नेताको आफूले जति बदख्वाइँ गरे पनि अर्को कसैले आलोचना गरेको सहन सक्तैनन् । गजबकै छ कांग्रेस मनोवृत्ति ! त्यसो त कांग्रेसहरू कम्युनिस्टका स्तरमा झरेर कसैको पनि बदख्वाइँ गर्न सक्तारहेनछन् । हुन पनि नेपाली कांग्रेस फुट्दासमेत नेताहरूबीच अहिलेजस्तो व्यक्तिगत आक्षेप कटाक्ष सुनिएको थिएन । यो सायद राजनीतिक संस्कारको विषय हो । (अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव लिन्डन बी जोन्सनका पालादेखि रेडियो सुनेर र पछि पढेर थाहा पाउँदै आएको हो । तर, डोनाल्ड ट्रम्प जति तल्लोस्तरमा त सन् २००८ की रिपब्लिकन उमेदवार सारा पालिन पनि ओर्लिनन् । उनले बाराक ओबामालाइ गरेको सबैभन्दा चर्को गाली ‘कम्युनिस्ट’ हो ।)
‘ चार वरिष्ठ’ र ‘३८ समूह’ राजदरबारको उपज हो ? (पछिल्ला दिनमा यीमध्ये केहीले राजाको कृपा पनि पाएका थिए ।) या इन्डोरसियन खेमाले यिनलाई बीपीको विरोध गर्न निर्देशित गरेको थियो ?
युवा अध्येताहरूले अलिकति ध्यान यता पनि देलान् ?